प्रश्नपत्रमा हदै लापरबाही « प्रशासन
काठमाडौं । ‘दसैंमा के–के गरिन्छ’ भन्ने वाक्यलाई अंग्रेजीमा कसरी उच्चारण गरिन्छ ? अंग्रेजी भाषामा सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिका लागि कुनै कठिन प्रश्न होइन यो । धेरथोर अध्ययन गरेका विद्यार्थी र शिक्षकका लागि त झन् यो प्रश्न अत्यन्तै सहज हुनुपर्ने हो ।
तर, परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माणका लागि एकै ठाउँमा जम्मा भएका राजधानीका ४९ वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने, ‘दसैंमा के–के गरिन्छ’ लाई अंग्रेजीमा ‘ह्वाट इज कन्फ्ल्टि’ भनेर अनुवाद गरेका छन् ।
सुन्दा पत्याउन नसकिने यो रोचक घटना काठमाडौंमा सञ्चालित पूर्वी क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको हो । कक्षा ६ को सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या शिक्षा विषयको पूरै प्रश्नपत्रमा नेपालीमा सोधिएका प्रश्न र त्यसको अंग्रेजी उच्चारणमा आकाश–जमिनको भिन्नता देखिएको छ । तर, यस विषयमा न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई जानकारी छ न त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई नै !
नेपाली विषयको पहिलो प्रश्नको ‘क’ नम्बरमा नेपालीमा सोधिएको छ, ‘गाविस भनेको के हो ?’ तर यसलाई अंग्रेजीमा भनिएको छ, ‘हाउ मेनी लेभल अफ गभर्नमेन्ट आर देअर इन फेडरल गभर्मेन्ट सिस्टम ?’ त्यस्तै अर्को प्रश्न नेपालीमा सोधिएको छ, ‘मानव बेचविखन भनेको के हो ?’ यसलाई अंग्रेजीमा सोधिएको छ, ‘ह्वाट इज द फुल फर्म अफ एटिएम ?’
काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले भने यस विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले अनुकूल हुने गरी आफूखुसी समिति बनाएर परीक्षा चलाउने गरेका कारण कार्यालयलाई आधिकारिक जानकारी आउन नसकेको उनले बताए । ‘आफूखुसी कतै पश्चिम भेगीय समिति, कतै पूर्वी भेगीय समिति बनाएका छन् तर यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कुनै व्यवस्था नै छैन’, उनले भने, ‘समिति नबनाऊ भनेर निर्देशन दिने हो भने पनि शिक्षकलाई कसैले तह लगाउन सक्ने अवस्था छैन । आफूखुसी गर्दा यस्तै समस्या आउँछ । एउटा समूहका शिक्षकको कमजोरीका कारण सबैको बेइज्जत हुन्छ ।’
प्रश्नपत्र निर्माणमा शिक्षकबाट लापरबाही भएको यो नयाँ घटना भने होइन । ०६९ सालमा पनि कक्षा आठको नैतिक शिक्षा विषयको जिल्लास्तरीय परीक्षामा अघिल्लो वर्षकै प्रश्न हुबहु सोधिएको थियो । यसरी अघिल्लो वर्षको हुबहु प्रश्न सोध्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रश्न बनाउने शिक्षकलाई सामान्य स्पष्टीकरण गरेर छाडिएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।